FAAFAAHIN:-Al Shabaab Iyo Mareekanka oo Ku dagaalamay Garnoonka Baladoogle – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
FAAFAAHIN:-Al Shabaab Iyo Mareekanka oo Ku dagaalamay Garnoonka Baladoogle
Ahmed weheliye Gaashaan 30 September 2019
Faah-faahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya Qaraxyo maleeshiyaadka Al-shabaab ay goordhaweyd ku weerareen saldhiga ugu weyn ee ciidamada Maraykanku ay ku leeyihiin Soomaaliya kaas oo ku yaalla Garoonka diyaaradaha ee Balodoogle ee Gobolka Shabeelaha Hoose.
Weerarka ayaa ku bilowday gawaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa,waxaana xigay dagaal toos ah oo dhexmaray ciidamadda Mareykanka iyo kuwa Al-shabaab.
Wali lama oga khasaaraha ka dhashay weerarkan xoogan ay Al Shabaab ku qaadeen saldhiga Balli-Doogle, waxaana saldhigan degan ciidamo Mareykan ah oo gacan siiya ciidanka Kumaandooska Soomaaliya ee howlgaladda kawada Goboladda Shabeelooyinka.
War kooban oo kasoo baxay Dagaalamayaasha Al Shabaab ayaa lagu sheegay in ciidamadoodu ay qaadeen howlgal weyn oo ka dhan ah ciidamada Mareykanka ee hogaaminaya dagaalka Shabaab ka dhan ah.
Madaxweyne farmaajo oo dalka dib ugu soo laabtay iyo laba weerar oo lagu qaaday cidamo cawiya xooga dalka SNA….